Tilmaamaha ugu Sareeya ee Qorista Farriimaha SMS-ka ee Guusha leh | Martech Zone
Talaado, Febraayo 11, 2014 Isniin, Janaayo 16, 2017 Douglas Karr
Heerarka jawaab celinta iyo beddelka ee farriimaha qoraalka ah ee loo soo diro aaladda moobaylka waa kuwo cajiib ah. Oo runtiina waa tan kaliya ee fariimaha caalamiga ah ee halkaa ka jirta tan iyo madal kasta oo kale ay leedahay shaandhaynta qashinka iyo arrimaha iswaafajinta. Tani macluumaad ku saabsan TextMarketer waxay tilmaamaysaa dhowr cunsur oo muhiim ah oo farriin suuqgeyn SMS ah oo wax ku ool ah:
Ka bilow feejignaan soojiidasho si akhristaha loogu mashquuliyo waxna loogu akhriyo.
Ha isticmaalin soo gaabinta qoraalka - inta badan isticmaaleyaasha moobiilku ma fahmaan.
Hayso gaaban - Hal qoraal waa 160 xaraf (in kasta oo aad diri karto farriimo qoraal oo qaybo badan ka kooban).
U sheeg qofka aad tahay - Macaamiisha ma garanayaan halka ay farriintu ka imanayso inaad adigu ku dhawaaqdo mooyee.
U sheeg waxay samaynayaan - Baaqa adag ee ficilka ayaa fure u ah kordhinta waxtarka fariintaada.
Tags: infographicfariin moobilfarriinta moobaylkaSMSfariin smsfarriin qoraal ahsuuq-geynta